रेल गुड्न नपाउँदै रेल्वे लिकको ‘क्लिप’ चोरी ! | साँचो खबर
रेल गुड्न नपाउँदै रेल्वे लिकको ‘क्लिप’ चोरी !
२०७७ कार्तिक २८, शुक्रबार (२ हफ्ता अघि)
काठमाडौँ । नेपाली रेल जनकपुर आइ पुगेको २ महिना पूरा हुँदैछ । एक इन्जिन र चारवटा बोगी रहेको रेलका दुई सेटलाई दुई महिना अघि जनकपुरमा भव्य स्वागत गरिएको थियो । तर औपचारिक उद्घाटन हुन नपाउँदै पहिलो चरणमा भारतको जयनगरदेखि धनुषाको कुर्थासम्म चल्नुपर्ने रेल्वे लिकको ‘क्लिप’ चोरी हुन थालेको छ ।
जयनगरदेखि कुर्थासम्म ३५ किलोमटर लिक निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। कुर्थाबाट महोत्तरीको बिजलपुरा हुँदै बर्दिबाससम्म कुल ६९ किलोमिटर रेल्वे लिकको निर्माण कार्य जारी छ। यता निर्माण हुँदै छ अर्कोतिर निर्माण भइसकेको लिकको ‘क्लिप’ धमाधम चोरी भइरहेको छ । रातोपाटीलाई प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार दुई महिनाको अवधिमा ६ सय क्लिप चोरी भएका छन् ।
लिकमा प्रयोग हुने एउटा क्लिपमा करिब आधा केजी फलाम हुन्छ । क्लिप चोर्नेहरूले कवाडमा बेच्ने गरेको बताइएको छ । भारत सरकारको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा कुर्थासम्म निर्माण सम्पन्न भएको रेल्वे लिकको क्लिप धमाधम चोरी भइरहेको रेल विभा गका प्रवक्ता अमन चित्रकारले स्वीकार गरेका छन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै चित्रकारले भनेका छन्– ‘लिकको क्लिप बेला–बेला चोरी भइरहेको छ ।
देशको माया नगर्नेहरूले क्लिप चोरेको जस्तो लाग्छ।’ गत साता काठमाडौँमा सम्पन्न बैठकमा रेल विभागकी महानिर्देशक प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यले धमाधम क्लिप चोरी भइरहेको कुरा उठाएकी थिइन् । नेपाल–भारत सम्बन्धमा असर पार्नेगरी रेल्वे लिकमा क्षति गरिएको भन्दै रेल विभागका अधिकारीहरूले चिन्ता गरेका छन् । रातोपाटीमा खबर छ ।